Yakha i-Online Directory ye-WordPress nge-GravityView | Martech Zone
Uma uke waba yingxenye yomphakathi wethu isikhashana, uyazi ukuthi sithanda kangakanani Amafomu eGravity okwakhiwa kwamafomu nokuqoqwa kwedatha ku-WordPress. Yipulatifomu ekhazimulayo nje. Ngisanda kuhlanganisa Gravity Amafomu nge I-Hubspot yeklayenti futhi isebenza kahle.
Isizathu esiyinhloko sokuthi kungani ngithanda amafomu eGravity ukuthi empeleni isindisa idatha endaweni yangakini. Konke ukuhlanganiswa kwe- Gravity Amafomu izobe isidlulisela imininingwane kusistimu yomuntu wesithathu. Lokhu kumele kumakhasimende ami… Angifuni idatha elahlekile uma i-API yenkampani yangaphandle yehla noma kunolunye uhlobo lwenkinga yokuqinisekisa. Iningi lamafomu wokuxhumana alula emakethe awenzi nje lokho.
Ngokwengeziwe, ngamathuluzi afana neReCaptcha neGoogle Maps asebenza ngaphandle kwebhokisi, kumane nje kuyisistimu eqinile. Ngithenge ilayisense lesiza elingenamkhawulo eminyakeni edlule futhi bengilisebenzisa cishe sonke isixazululo ongasicabanga.
Ungayibonisa Kanjani Idatha Yamafomu Okudonsela phansi?
Amafomu eGravity iyithuluzi elihle lokonga idatha… kepha kuthiwani uma ufisa ukubonisa leyo datha kusayithi lakho? Ngisungule ama-calculator akwi-inthanethi wamakhasimende akwenzile lokhu, futhi bekungewona umsebenzi olula. Ngiphinde ngasungula umkhiqizo wokuhamba komsebenzi okhombisa idatha yangaphakathi kumphathi… bekungumsebenzi omkhulu.
Yebo, wamukelekile I-GravityView! IGravityView iyi-plugin ye-WordPress ongayisebenzisa ukushicilela idatha yakho yamaFomu eGravity. Kuyinto enhle - futhi ithole ngisho nesibusiso samaFomu eGravity njengesisombululo esithandwayo.
Ukwakha umkhombandlela we-inthanethi kuvele kwaba lula! Yakha ifomu lokuthwebula imininingwane, bese wakha amamephu nohlu lwemibhalo olubonisa idatha… ngaphandle kokubhala umugqa owodwa wekhodi!
IGravityView inika amandla wokwakha ukubukwa okungenamkhawulo, ivume futhi yenqabe okufakiwe ngaphambi kokuthi iphile bukhoma, futhi inike amandla ukuhlela kwalokhu okufakiwe kusuka ngaphambili-ekugcineni. Hlanganisa i-WordPress, Amafomu eGravity, ne-Gravity View, futhi unohlelo lokuphathwa kokuqukethwe olukwazi ukuqoqa futhi lubonise idatha noma ngabe ungathanda.
Idatha ingabukwa njengohlu, amatafula, amatafula wedatha, noma kumamephu.
Isebenza kanjani iGravityView?
Dala ifomu - Okokuqala, dala ifomu nge Amafomu eGravity, amafomu amahle kakhulu we-WordPress. Faka izinkambu kufomu bese ulishumeka kuwebhusayithi yakho.
Hlanganisa idatha - Bese ugcwalisa ifomu. Imininingwane yakho izogcinwa kufayela le- emuva emuva kuwebhusayithi yakho, ngaphakathi kwe-plugin ye-Gravity Forms.
Dizayina ukwakheka kwakho - Dala ukwakheka kwakho okuhle usebenzisa isikhombimsebenzisi sokuhudula bese uphonsa. Khetha ukuthi yiziphi izinkambu ozozifaka nokuthi uzozibonisa kuphi. Akudingeki ukufaka ikhodi!
Yengeze kusayithi lakho -
Ekugcineni, shumeka futhi ubonise idatha yakho ekugcineni kwewebhusayithi yakho. Ungabuka noma uhlele okufakiwe ngaphandle kokuya kumenyu ye-WordPress.
Ukuzikhulula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo ze Gravity Amafomu futhi I-GravityView kulesi sihloko.
Tags: lobulunguukuqoqa idathaithebula ledathaI-google mapsamafomu adonsela phansiukubhekaindawoisiqondisi esiku-inthanethiamabalazwe we-wordpress